नि: शुल्क PowerPoint टेम्पलेट्स - विविध चयन | रचनात्मक अनलाइन
एनकर्नी आर्कोया | 11/09/2021 13:03 | पुनरावृत्त
विद्यार्थीहरु को लागी सबैभन्दा सामान्य उपकरणहरु मध्ये एक हो, स्कूल, संस्थान वा विश्वविद्यालय मा, एक शक बिना, PowerPoint। यसको साथ उनीहरु स्लाइड बनाउन को लागी सक्षम छन् जसको साथ उनीहरु आफ्ना सहपाठीहरु को लागी एक विषय प्रस्तुत गर्न जाँदैछन्, वा उनीहरु लाई उनीहरुका शिक्षकहरु लाई हस्तान्तरण गर्न को लागी। कार्यक्रम भित्र तपाइँ पाउन सक्नुहुन्छ पावर पोइन्ट टेम्प्लेट तर के हुन्छ यदि तपाइँ अधिक मौलिक हुन चाहानुहुन्छ?
सौभाग्य देखि, हामीले यसको बारेमा सोचेका छौं, यो एक रचनात्मक स्पर्श दिन को लागी र साधारण बाट बाहिर हुन को लागी ताकि तपाइँको काम अझ राम्रो देखिन्छ। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कसरी? PowerPoint टेम्प्लेट मा एक नजर राख्नुहोस् कि हामीले पाएका छौं कि तपाइँ तपाइँको काम को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो पेशेवर वा शैक्षिक हो। पक्कै त्यो तरीकाले तपाइँ जो कोहि उनीहरुलाई देख्नुहुन्छ को ध्यान कब्जा।
1 किन मूल Powerpoint टेम्प्लेट मा शर्त
2 सबै भन्दा राम्रो पावर पोइन्ट टेम्प्लेट सामान्य बाट बाहिर प्राप्त गर्न को लागी
2.1 बहुरंगी सर्कल संग प्रस्तुतीकरण टेम्पलेट
2.2 इंद्रधनुष लाइन टेम्पलेट
2.3 पुरानो पावर पोइन्ट टेम्पलेट्स
2.4 क्यानभा मा पावर पोइन्ट टेम्प्लेट
2.5 रमाईलो छुट्टी प्रस्तुति
2.7 उत्पादनहरु को लागी पावर पोइन्ट टेम्प्लेट
2.8 ब्रान्ड प्रस्तुति
2.9 सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति पावर पोइन्ट टेम्पलेट्स
2.10 उत्पादनहरु को लागी प्रस्तुति
2.11 व्यापार को लागी टेम्प्लेट
2.12 रेस्टुरेन्ट को लागी PowerPoint टेम्पलेट्स
किन मूल Powerpoint टेम्प्लेट मा शर्त
यदि तपाइँसँग PowerPoint कार्यक्रम छ, यो धेरै सामान्य छ कि तपाइँ यसमा टेम्प्लेट्स हुनुहुन्छ र तपाइँ तिनीहरूलाई तपाइँको काम को लागी प्रयोग गर्नुहुन्छ। जे होस्, यदि तपाइँ धेरै गर्न थाल्नुहुन्छ, उनीहरु दोहोर्याउने लाग्न सक्छ, मात्र चीज मात्र तपाइँ परिवर्तन गर्नुहुनेछ र colors र पाठ हो।
पहिले, र एक समय को लागी, यो यो धेरै राम्ररी देखिएको थियो किनकि यस तरीकाले सबै परियोजनाहरु एकै आकार को थियोसाथै रोजगार, र त्यहाँ कुनै भेद थिएन। तर, समय बित्दै जाँदा, मानिसहरु चुनिंदा हुन थाले, सामान्य देखेर थकित हुन थाले, र उनीहरु लाई थाहा हुन थाल्यो कि, थोरै परिवर्तन संग, उनीहरु लाई अधिक अन्तरक्रिया, अधिक गतिशीलता, आदि मिल्यो।
अब पावरप्वाइन्ट टेम्प्लेटहरू हुनु जुन न केवल पाठलाई कम्प्यूटरीकृत गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, तर यो सजाने र दर्शकलाई ध्यान दिईएको विवरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, धेरै सफल छ। ध्यान राख्नुहोस् कि तपाइँ भीडबाट बाहिर खडा हुनु पर्छ र यो रचनात्मकता को लागी यो प्राप्त गर्ने एक धेरै महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। अरु के छ त, एक PowerPoint प्रस्तुति तपाइँको दर्शकहरु संग पहिलो सम्पर्क हो, र यो तपाइँको सबै काम को सफलता वा असफलता लाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसोभए किन टेम्प्लेटहरू छैनन् कि स्टाइलिश छन् र त्यो साँच्चै तपाइँको परियोजनाहरु लाई समृद्ध बनाउँछ?
सबै भन्दा राम्रो पावर पोइन्ट टेम्प्लेट सामान्य बाट बाहिर प्राप्त गर्न को लागी
अर्को हामी तपाइँलाई पावरपोइन्ट प्रस्तुतीकरण टेम्प्लेट को उदाहरण दिन जाँदैछौं ताकि तपाइँ सधैं एकै चीज संग रहनुहुन्न।
बहुरंगी सर्कल संग प्रस्तुतीकरण टेम्पलेट
यसको साथ तपाइँ तपाइँको परियोजनाहरु को लागी एक अधिक गतिशील र हर्षित उपस्थिति दिन सक्षम हुनुहुनेछ। यो गुगल को एक धेरै याद दिलाउँछ, विशेष गरी को लागी सर्कल र रंग, टेक्नोलोजी, इन्टरनेट, वेब पेज, आदि संग सम्बन्धित परियोजनाहरु मा। यो धेरै सफल हुन सक्छ।
तपाइँ यसलाई यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
इंद्रधनुष लाइन टेम्पलेट
यो पुरा तरिकाले सम्पादन योग्य छ र तपाइँ दुबै फोटो र पाठ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अतिरिक्त, तपाइँसँग छ 25 फरक स्लाइड, तेसैले तपाइँ यसलाई तपाइँको मनपर्ने अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनी ० आइकन र एक विश्व नक्शा छ जहाँ तपाइँ रंग र आकार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अनुकूल गर्न को लागी।
तपाइँ यसलाई यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ:
इंद्रधनुष लाइन प्रस्तुति टेम्पलेट
पुरानो पावर पोइन्ट टेम्पलेट्स
यस पटक हामीले एक संग सोचेका छौं एक पुरानो र सुरुचिपूर्ण स्पर्श, एक निश्चित ग्लैमर र एकै समयमा पुरानो यादहरु संग। प्रस्तुतीकरण को लागी आदर्श हो कि भविष्य र आधुनिक मा धेरै ध्यान केन्द्रित छैन, तर सेवा वा उत्पादन को भावनात्मक र न्यानो हावा को संरक्षण मा।
Moodboard संग पुरानो प्रस्तुति टेम्पलेट
क्यानभा मा पावर पोइन्ट टेम्प्लेट
यस मामला मा हामी एक विशिष्ट टेम्पलेट को बारे मा कुरा गरीरहेका छैनौं, तर एक ठाउँ को बारे मा जहाँ तपाइँ छनौट गर्न को लागी बिभिन्न Powerpoint टेम्प्लेटहरु पाउन सक्षम हुनुहुनेछ। तपाइँ बिभिन्न मोडेलहरु तपाइँको परियोजना को उद्देश्य मा निर्भर गर्दछ, चाहे यो रिज्युमे को लागी हो, सामाजिक नेटवर्क को लागी, विज्ञापन को लागी, प्रस्तुतीकरण को लागी। आदि राम्रो कुरा त्यो हो उनीहरु सित्तैमा छन्, ती मध्ये केहि मात्र तिर्नेछन्।
रमाईलो छुट्टी प्रस्तुति
यात्रा व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट, आदि को लागी उदाहरण को लागी एक यात्रा परियोजना प्रस्तुत गर्न को लागी आदर्श।
तपाइँ स्लाइड पाउनुहुनेछ ढाँचा र तयार छ ताकि तपाइँ मात्र छविहरु र पाठ कि तपाइँ राख्न को लागी समावेश गर्न को लागी छ। यो धेरै राम्रो देखिन्छ र छवि पाठ मा प्राथमिकता दिईन्छ किनकि के यो खोज्छ उनीहरु को माध्यम बाट ध्यान कब्जा गर्न को लागी हो।
तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ
यदि तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ अधिक गम्भीर पावरपोइन्ट टेम्पलेट्स हो कि एक धेरै पेशेवर शैली संग देख्नुहुन्छ, बोरिंग र नरम बिना, तपाइँ यो एक छ। मुख्य रंग नीलो हो, त्यसैले यदि यो तपाइँको मनपर्ने हो तपाइँ पहिले नै केहि कमाईएको छ, यद्यपि सत्य यो हो कि यो चार रंगहरुमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। पनि छ ४५ फरक टेम्पलेट्स पूर्णता को लागी तपाइँको काम अनुकूलन को लागी।
उत्पादनहरु को लागी पावर पोइन्ट टेम्प्लेट
यदि तपाइँ एक निर्माण गर्न आवश्यक छ फोटो आधारित प्रस्तुति, यो एक उत्पादन (एक घर, एक कोठा, सजावट, आदि) हुन सक्छ यहाँ तपाइँ ती मध्ये एक छ। यो एउटा टेम्पलेट हो जहाँ पाठ बाहिर खडा छ तर, सबै भन्दा माथि, छविहरु।
पहिले हामी तपाइँलाई भनीसकेका छौं कि सुरुचिपूर्ण टेम्पलेट्स तिनीहरू बोरिंग वा नरम हुनु पर्दैन, र यो तपाइँको अर्को उदाहरण हो। यसमा तपाइँ अधिक हड्ताल रंगहरु, साथ साथै सेतो को उपयोग गर्नुहुनेछ। यसले तपाइँलाई एक अधिक गतिशील स्पर्श दिनेछ र यो खराब हुन को लागी छैन, तर यो पेशेवर देखिनेछ तर "चमक" को एक स्पर्श संग।
सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति पावर पोइन्ट टेम्पलेट्स
एक मध्यवर्ती कदम यो हो। यो अधिक पेशेवर र आधारभूत देखिन्छ, तर एकै समयमा विभिन्न स्लाइड मा केहि तत्वहरु लाई हाइलाइट गर्दछ, जो तपाइँ एक गम्भीर परियोजना प्रस्तुत गर्न को लागी अनुमति दिन्छ तर केहि अद्वितीय brushstrokes संग।
उत्पादनहरु को लागी प्रस्तुति
Powerpoint टेम्प्लेट को एक अर्को कि तपाइँ उत्पादनहरु देखाउन को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो एक हो। यो एक हो नि: शुल्क प्रस्तुति भित्री डिजाइन मा केन्द्रित, यद्यपि सत्य यो हो कि तपाइँ यसलाई धेरै धेरै चीजहरु को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
व्यापार को लागी टेम्प्लेट
यदि तपाइँ एक व्यापार प्रस्तुत गर्न को लागी देखीरहनु भएको छ र यो यति औपचारिक छैन, तर यसको विपरीत, तपाइँ यस प्रस्तुतीकरण को बारे मा सोच्न सक्नुहुन्छ। यो द्वारा विशेषता छ मूल चित्र र डिजाइन, रातो टोन मा र एक नजर संग कि यो एक विदेशी र पूर्वी "केहि" दिन्छ।
रेस्टुरेन्ट को लागी PowerPoint टेम्पलेट्स
यदि तपाइँको ग्राहक संग परियोजना एक रेस्टुरेन्ट संग गर्न को लागी छ, यो एक उत्तम प्रस्तुतिहरु तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक आधुनिक शैली टेम्पलेट हो कि वित्त, कार्य टीम, उत्पादन, आदि प्रदर्शन गर्न को लागी विभिन्न विकल्पहरु छन्। यसको अतिरिक्त तपाइँ सक्नुहुन्छ फन्ट प्रकार, रंग र अधिक परिवर्तन गरेर अनुकूलित गर्नुहोस्।
जसरी तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै पावरपोइन्ट टेम्प्लेटहरू छन्, तपाइँले मात्र एक पाउनु पर्छ कि सबैभन्दा राम्रो सूट के तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ। के तपाइँ कुनै सिफारिश गर्नुहुन्न?
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » नि: शुल्क PowerPoint टेम्पलेट्स